चौतारो संरक्षण अभियानमा वडा कार्यालय – Tanahun Khabar
हरि खरेल/ दुलेगौडा । धार्मिक र संस्कृतिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानिएको चौताराहरु अहिले विकासको नाममा मासिदै जान थालेको छ । मानिसहरुले सडकको स्तर उन्नती गर्ने साथै भवनहरु निर्माण गर्ने क्रममा उक्त संरचना नास हुदै गएको हो । तर पनि तनहुँको शुक्ललागण्डकी नगरपालिका वडा नं. १० ले भने बजेट नै विनियोजन गरि चौतारो संरक्षण तथा मर्मत गर्न थालेको छ ।
धार्मिक र वातावरणीय हिसाबले पनि राम्रो मानिएको हुदाँ चौतारा संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य गरिदै आएको वडा नं. १० का वडाध्यक्ष रामचन्द्र भण्डारीले बताए । वडामा रहेका चौताराहरुलाई संरक्षण र प्रर्वद्धन गर्ने उद्देश्यले प्रत्येक बर्ष चौतारो निर्माण कार्य गरिदै आएको जानकारी दिए । उनका अनुसार यस बर्ष वडाले ५ वटा र नगरले १ वटा गरि ६ वटा चौतारा निर्माण गर्ने योजना रहेको छ । “हामीले अहिले २ वटा चौतारा निर्माण गरिसकेका छौ, २ वटा निर्माणधिन अवस्थामा रहेको छ भने बाँकी २ वटाको चाँडै नै निर्माण कार्य सुरु गर्ने छौ ।” वडाध्यक्ष भण्डारीले बताए ।
पुर्खाले निर्माण गरेका ढुङ्गे पोखरी, चौतारा जस्ता संरचनाहरुको संरक्षणको लागि व्यवस्थित रुपमा मर्मत कार्य गरिदै आएको वडा नं. १० का वडा सदस्य एवम् योजन शाखा प्रमुख राजेन्द्र भट्टराई क्षेत्रीले जानकारी दिए । संरचनाहरुको संरक्षण नगरे नास भएर जाने हुदाँ अभियानको रुपमै मर्मत संहार गरिएको बताए । उनका अनुसार गत बर्ष ५ वटा चौताराको मर्मत गरिएको र यस बर्ष पनि ६ वटाको मर्मत र संरक्षण गरि ११ वटा चौताराको संरक्षण गर्ने भएको छ ।
वडाले चालु आर्थिक बर्ष चौतारा निर्माणको लागि वडा कार्यालयबाट ५ लाख र नगरबाट १ लाख रुपैया बजेट विनियोजन गरिएको वडा नं. १० का वडा सचिव युवराज पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार एक वटा चौतारा संरक्षणको लागि १ लाख रुपैयाँ छुट्टाईएको र सोही अनुसार टोलको मातहतमा रहेका कार्य अगाडी बढाईएको छ ।
आलु खेति गरेर समृद्धी खोज्दै कृषक
विजुली उत्पादनको अन्तिम तयारीमा बेलचौताराको सोलार फार्म